Momba anay - Yantai Ramtec Engineering Machinery Co., Ltd.
Yantai Ramtec Engineering Machinery Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina mpandika hydraulic manambatra fikarohana sy fampandrosoana, fanamboarana, varotra ary serivisy. Ny orinasa dia manana 6.000 metatra toradroa ny famokarana fenitra famokarana sy 2.000 metatra toradroa ny birao birao, ary koa ekipa matihanina mihoatra ny 100 ny olona. miaraka amin'io fotoana io dia manana fitaovana milina CNC marimarina, ary nandritra ny taona maro nirotsaka tamin'ny fikarohana vokatra hydraulic sy ny fampandrosoana ny injeniera, mpiasa milina zokiny, fitaovana debugging mpiasa teknika sy ny mpiangona.
Ny fahaiza-manao famolavolana isan-taona an'ny orinasa dia milina feno 3500. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra lehibe dia ny RAMTEC, RB, KOYAMA, KYB ary andiam-pandrefesana hafainganam-pandeha maivana, mpanaparitaka hidy-volo antonony, mpamaky vy be mpampiasa, Ny vokatra dia mety amin'ny ankamaroan'ny mpitrandraka any ivelany izay manohana ny fampiasana. Miaraka amin'ny haitao famokarana mandroso, fizotran'ny dingana mahafinaritra ary rafitra fitantanana kalitao henjana amin'ny famokarana, ny orinasa dia manolo-tena amin'ny làlan'ny fampandrosoana ny marika avo lenta, ary manondrana hatrany hatrany fitaovana fanaparitahana hydraulic tsara kalitao sy maharitra ho an'ny indostrian'ny milina fanamboarana manerantany.
Hatramin'ny nanombohan'ny orinasa dia nanangana vina lehibe izahay hampifangaroana ireo fitaovana avo lenta novokarin'i Ramtec tamin'izao tontolo izao. Fantatsika fa raha te hahatratra ny tanjona stratejika amin'ny orinasa efa zato taona isika, fitantanana kalitao henjana ary ny fanavaozana sy ny fampandrosoana mitohy no hany lalana tsy maintsy alehantsika. Avy amin'ny famolavolana ka hatramin'ny famokarana, manomboka amin'ny fividianana ka hatramin'ny fanaraha-maso, manomboka amin'ny fandalinana kalitao ny ampahany ka hatramin'ny fanandramana fampisehoana feno ny milina iray manontolo, ny olona Ramtec dia nametraka ny fitantanana kalitao hatrany. amin'ny voalohany
Misy fanontaniana ve? Antsika ny valiny.
Mba hananana mpamatsy akora mahay sy maharitra, dia namorona fenitra voafantina henjana izahay, ny akora manta kalitao no fotokevitra voalohany amin'ny famokarana vokatra avo lenta.
Manafoana tanteraka ireo vokatra tsy mety rehetra dia Ramtec ny mpiasa rehetra manaraka ny fari-pahaizan'ny asa.
Manana mpiasan'ny fitehirizana matihanina izahay, amin'ny alàlan'ny rafi-pitantanana fitehirizana maoderina azo antoka sy milamina, ka lasa rohy mifandraika amin'ny fifandraisana mahomby ny departemanta tsirairay;
Ny ekipa mpikaroka sy mivoatra matanjaka, fanatsarana tsy tapaka ary fanatsarana ny fahombiazan'ny vokatra, fanangonana vaovao momba ny hevitra momba ny fampiasana mpanjifa ara-potoana, mifanaraka amin'ny filan'ny tsena, dia ahafahana mifehy tsara ny fangatahana tsena.
Ny orinasa koa dia manana sampana fanaraha-maso kalitao sy fitantanana kalitao matihanina, matihanina, mahomby, mafy loha izy ireo; Avy amin'ny akora mankany amin'ny ozinina, ny fenitra fitantanana kalitao, miziriziry amin'ny ampahany lehibe amin'ny fikarohana sy ny famokarana fampandrosoana, mifehy tsara ny fizotry ny famokarana, tsirairay avy fomba fanao amin'ny dingana kely hikorisa hametrahana, lehibe amin'ny fivorian'ny masinina manontolo, sosona isaky ny sosona, fenitra, ampiarahana amin'ny traikefa amin'ny famokarana manan-karena, ny fampiasana fitaovana sy fitaovana mandroso ho an'ny fandrefesana sy fikajiana marina ary ny fizotry ny famokarana ny vokatra tsirairay. ho an'ny fanaraha-maso ny fizarana 360 degre.
Naseho ny ekipa
Masinina Ramtec, injeniera vaovao, manafaingana ny nofinofy sinoa!